Antsirabe: Mpividy moto halatra miisa 5 nosamborin'ny Polisy
vendredi, 14 juin 2019 13:58
Nirongatra ny halatra moto teto Antsirabe tato ho ato. Maro ny fitarainana voarain'ny Polisy mikasika izany. Noho ny ezak'ireto farany dia mpividy moto halatra miisa 5 no voasambotra ary dia hatolotra ny Fampanoavana.
Miainga eto Antsirabe ny halatra, hoy ny Kaomisera Patrick, ary any Bemaha sy Manapa ary Andremebesoa no tena ivarotana ireo moto Cross halatra, satria lavitra any ka tsy atahorana ny hahitan’ny tompony azy. Tsy misy fanovana firy rahateo ireo moto tratra ireo.
Nisy ihany koa ny moto iray tratran’ny tompony teny an-dalana, izay efa ny volana martsa 2019 no nahaverezany. Io no nisamborana ny mpividy voalohany, ary nahatratrarana ireo namany hafa izay nivarotra niampitapita.
Hatreto kosa dia mbola eo ampikarohana ireo tena mpangalatra ny Polisy.
Misy mpividy sy mpandray finday halatra ihany koa no voasambotra.